स्वाबलम्बन लघुबित्तको नाफा करिब ७४ प्रतिशतले बृद्धि - Aarthiknews
स्वाबलम्बन लघुबित्तको नाफा करिब ७४ प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. ६१ करोड ९४ लाख ८२ हजार खुद नाफा गरेको छ । मंगलवार सार्वजनिक कम्पनीले वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष ७३ दशमलव ९२ प्रतिशत बढी खुद नाफा भएको हो । गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन नाफा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा ४८ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्लो वर्ष रू. ५६ करोड ५३ लाख ७३ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ५६ करोड ५३ लाख ७३ हजार यो नाफा गरेको हो । अघिल्लो वर्ष शून्य रहेको खराब कर्जा संकलन यस वर्ष रू. १४ करोड १५ लाख १२ हजार रहेको छ । खराब कर्जा संकलन बढेको कम्पनीले १४ दशमलव ४३ प्रतिशत कम रू. २९ करोड १० लाख ४९ हजार सम्भावित जोखिमका लागि छुट्याएको छ ।
१९ दशमलव शून्य १ प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत चुक्तापूँजी बृद्धि भई रू. ९४ करोड ३० लाख पुगेको कम्पनीको जगेडा कोष रकम पनि २८ दशमलव ३६ प्रतिशत बढेर रू. १ अर्ब ७४ करोड ८८ लाख ७३ हजार कायम भएको छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा ३ दशमलव ११ प्रतिशत कम रू. ४ अर्ब ६१ करोड ५२ लाख ३६ हजार कर्जा सापटी लिएको कम्पनीले करिब १४ प्रतिशत बढी रू. १७ अर्ब ३३ करोड १९ लाख ८३ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीले १४ दशमलव ४१ प्रतिशत बढी रू. १० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ३ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ ।
कम्पनीको अघिल्लो वर्ष १ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा गत वर्ष २ दशमलव ३९ प्रतिशत बढेर ४ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ६५ दशमलव ६९ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २८५ दशमलव ४६ रहेको छ ।